Zeziphi iintlobo eziphambili SPS squeegee?
SPS squeegee ihlelwa ngokwezintlu ezithathu eziphambili: 1. Traditional M-uhlobo squeegee (ngaphandle kwenkxaso nembasa). 2, FGB fiberglass ukukrwela. 3, AS unilateral carbon ifayibha sisusa intshungama.
Kukho iindlela ezininzi werabha yinxalenye SPS squeegee?
Ngoku kukho imifuziselo emibini, omnye i M-uhlobo yerabha esetyenziswa kwi-M-uhlobo kunye FGB panel fiberglass, kwaye enye i rubber KWAKUNYE nesithuba ezisetyenziswa ifayibha AS-carbon (conductive, ngakumbi ezinganyibiliki-ukumelana, yaye ngaphezulu wear- ukumelana).
Zeziphi iinkcukacha ubukhulu M uhlobo sisusa glue?
imifuziselo M babe 9 * 50, 9 * 30, 7 * 40, 5 * 25, 5 * 20 tip ubukhulu njengako babulingana nesandla, kwaye ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi.
Yintoni na imilinganiselo FGB fiberglass ize?
I yemveli fiberglass kushishino yoshicilelo screen FGB sisusa nengcombolo 9 * 50, ubude azinxweme ngokweemfuno zabathengi. Ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi.
Yintoni na imilinganiselo AS carbon fiber squeegee?
Ishishini yoshicilelo yemveli screen AS iinkcukacha carbon ifayibha kokuphalwa 7 * 50, ubude ngokweemfuno zabathengi. Ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zabathengi.
Yintoni ifomathi yefayile nokwenziwa ixesha ezifunekayo iinkonzo siko?
3D: STP, XT; Cad: 2000 version, ixesha isiko: zingadlulanga iintsuku ezi-5 zomsebenzi
Iintlobo ezintathu ize na phantsi. M imodeli kunye nomzekelo FGB ubuninzi olunye besila 0.5mm mali (enemingxuma 200 besila ivili). AS carbon ifayibha sisusa single ubuninzi sokusila mali 0.1mm (200 enemingxuma besila ivili, ibhodi carbon ifayibha nako kuba emhlabeni). Le squeegee ethe nje sele bewugqibile iqulethe eninzi ngaphakathi kuphela. Yobulukhuni ngohlangothi imela iphantsi kakhulu ukuba umhlaba kwangoko. Kuthatha iiyure ezingama-24 kuphela ngaphambi ukugaywa.
Indlela ukufaka FGB fiberglass ize kwaye AS carbon ifayibha ize ibe kwemidlalo eqhelekileyo?
Zombini FGB fiberglass ize kunye AS carbon ifayibha ize ezi 1.2mm zamafu. Baya ingafakwa nge-pad 8mm elingqingqwa, apho thina singakwazi ukubonelela.
Ukugcinwa SPS Squeegee?